६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव नेपाल सरकार : यो भ्रष्टाचार होइन भने के हो ? – CIN Nepal News & Online Radio Network
६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव नेपाल सरकार : यो भ्रष्टाचार होइन भने के हो ?
By Cin Desk	 पछिल्लो अपडेट Jun 23, 2020 235 0
६. चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले दुई सय ८० रुपैयाँ (१६.५० युआन) मा दिएको एन–९५ मास्क नेपाल सरकारले आठ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर) मा कसरी किन्यो ? त्यस्तै, चिनियाँ सरकारले पाँच सय पाँच रुपैयाँ (३० युआन) का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स नेपाल सरकारले २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) केको आधारमा तिर्‍यो ?
चिनियाँ सरकारले चार हजार सात सय १८ रुपैयाँ (दुई सय ८० युआन) मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर नेपाल सरकारले किन्दा सात हजार सात सय ७१ (६५ डलर) कसरी पर्‍यो ? यो भ्रष्टाचारको जवाफदेही नेपाल सरकारको कुन विभाग र कुन पदाधिकारी हुने ?
आज को nayapatrikadaily मा
मोतिसरमा ५० जना विपन्न लाइ राहत प्रदान
काेठा भाडा र निजी विद्यालयलाई चैत्र महिनाको सुल्क मिनाहा गर्न सरकारको आग्रह